အလွမ်း တွေနဲ့ ပြည့်နှက် နေပြီး အလွမ်းသမလေး တစ်ယောက် ဖြစ်နေကြောင်း ပရိတ်သတ်ကို ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ရေဗက္ကာဝင်း…. – Shwe Naung
အလွမ်း တွေနဲ့ ပြည့်နှက် နေပြီး အလွမ်းသမလေး တစ်ယောက် ဖြစ်နေကြောင်း ပရိတ်သတ်ကို ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ရေဗက္ကာဝင်း….
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…ပြည်သူ ချစ်ဂီတ အနုပညာရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အဆိုတော် ရေဗက္ကာဝင်းဟာဆိုရင်တေးသီ ကောင်းတွေကိုသီဆိုရင်းဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ အောင်မြင်မှု တွေနဲ့လျှောက်လှမ်းခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပဲ ဖြဟ်ပါတယ်နော်။
သူမသီဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်း တစ်ပုဒ်ချင်းဆီတိုင်း ကလည်း ပရိတ်သတ် တွေရဲ့အကြိုက်နဲ့ထပ်တူ ကြခဲ့တဲ့အတွက် သီချင်းသစ်တစ်ပုဒ်ထွက်တိုင်းမှာ ဝက်ဝက်ကွဲ အောင်မြင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ေအာင်မြင်မှုတွေနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ ရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အပြည့်အဝရ ရှိထားတဲ့ရေဗက္ကာဝင်းက စိတ်ထားဖြူစင် လွန်တဲ့အပြင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက် မဟုတ်ပေမယ့်လည်း အလှူအတန်းကို လက်မနှေးပဲလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့် စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ ဖြစ်နေတဲ့ ပြည်သူတေကို သူမကိုယ်တိုင် ထမင်းဟင်းတွေကိုချက်ပြုတ်ပြီးလှူဒါန်းခဲ့တာကို လညး်ဝမ်းမြောက်စွာ တွေ့မြင်ခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။စိတ်ထားဖြူစင်တဲ့ရေဗက္ကာဝင်းဟာ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်.။
အခုတစ်ခါမှာ ဆိုရင်လည်း ရေဗက္ကာဝင်းက သူမရဲ့ ခံစားချက်တစ်ချို့ကို ပရိတ်သတ်တွေကို ရင်ဖွင့်ခဲ့ပါသေးတယ်နော်။အဲ့ဒါကတော့ သူမရင်ထဲမှာ အလွမ်းတွေနဲ့ပြည့်နှက် နေတဲ့ပြီးအခုအချိန်မှာ အလွမ်းသမလေးဖြစ် နေတဲ့အကြောင်း ပြောပြလာခဲ့တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…။
သူမက ” ကျွန်မရင်ထဲမှာ အလွမ်း တွေချည်းပဲ…. ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မလွမ်းတယ်…. ကျွန်မဘဝကျွန်မလွမ်းတယ်…. တကယ်တော့ကျွန်မက အလွမ်းသမလေးပါပဲ….” ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူသူမရဲ့ ခံစားချက်တွေကို လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာကနေ တစ်ဆင့်ရင်ဖွင့်ပြောပြလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။
သူမကိုချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကလည်း Stage ပေါ်မှာ ဂါဝန်လေးဝတ်ပြီး လွင့်လွင့် လေးသီချင်းဆိုနေတဲ့ သူမရဲ့ပုံလေးကိုလည်း လွမ်းနေကြောင်းရေးသားထားတာ ကိုလည်း တွေ့မြင်ရပါတယ်နော်…။ ဖတ်ရှု ပေးတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်…။
အတွင်းသားလေးတွေ မြင်သာအောင် ဆက်ဆီကျကျ လှနေတဲ့ စံရတီမိုးမြင့်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…….
အမိုက်စား ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် နှင့် ဆက်ဆီကျကျ လှပနေတဲ့ စစ်ပိုးအိမ်….